Ciidamo ka tiran Amisom oo lagu sagootiyay Muqdisho - Awdinle Online
Ciidamo ka tiran Amisom oo lagu sagootiyay Muqdisho
December 25, 2019 (Awdinle Online) –Howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM ayaa Magaalada Muqdisho sagootin ugu qabtay shaqaale ka mid ahaa howlgalka AMISOM ee Soomaaliya.
Saraakiishan ka midka ahaa qeybta Rayidka ee AMISOM ayaa waxaa ay dhamayesteen shaqadooda Soomaaliya,waxaana la guddoonsiiyay billado lagu muujiyay wax qabadkooda muddadii ay ka howlgalayeen Soomaaliya.
Taliyaha Ciidanka AMISOM ee Soomaaliya Tigabu Yilma Wondimhunegn, ayaa uga mahad celiyay saraakiisha waxtarka ay ku soo kordhiyeen nabadeynta Soomaaliya iyo fududeynta shaqada AMISOM qeybta iyaga ka quseysay.
“Dadaalkiina ayaa lagu soo gaaray halkan, shaqadiina ayaa fududeysay in aan howlgal fulino,billadahan waa naf hurnimadiina, guul ayaad u horseeddeen AMISOM” ayuu yiri Taliye Tigabu Yilma Wondimhunegn.
Charles Imbiakha, oo ah Afhayeenka Ciidanka AMISOM qeybna ka ahaa dadka billadaha helay ayaa sheegay in qof kasta dadaalkiisa iyo kaalintiisa ay qeyb ka ahayd guusha howlgalka AMISOM.
Shaqaalaha AMISOM ee saraakiisha ah kana baxay Soomaaliya ayaa waxaa ay tiradoodu gaareysay 19 qof,waxaana ay u kala dhasheen Waddamada; Burundi, Ethiopia, Ghana, Kenya, iyo Uganda.
Previous articleWaa maxay sababta Ahlu Sunna Waljamaaca uga hor timid shuruudaha guddiga doorashada Galmudug
Next articleMadaxweyne Deni oo xaqiijiyay sababta loogu dhagan yahay maamulkiisa